‘‘ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဗီရာကိုထိုးသတ်ဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း။” •
10/06/2019 KPST အားကစား 0
မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ခါးပတ် ကာကွယ်ပွဲကို အကောင်းဆုံး ထိုးသတ်ပြီး ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီ .ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း.
အဆိုပါ လိုက်ဟဲဗီးဝတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်ကို အောက်တိုဘာ ၁၂ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဟဲဗီးဝိတ်တန်းက ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန် ဗီရာနဲ့ ထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၄၁နှစ် အရွယ်ရှိ ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန် ဗီရာဟာ အရပ် ၆ပေ ၃လက်မရှိပြီး MMA ပွဲပေါင်း ၂၄ပွဲမှာ ၁၆ပွဲ နိုင်ထားပြီး ၇ပွဲ ရှုံးထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
MMA ချန်ပီယံ နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် ယခင်က သင်ကြားခဲ့တဲ့ ဆရာတူ ဖိုက်တာနှစ်ဦးလည်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိ အောင်လအန်ဆန်းကတော့ ဒီနှစ် ၂၀၁၉ ခုထဲမှာ ချန်ပီယံနှစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး.
မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ ကို စတင်ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်ဖိုက်တာ ဗီရာကတော့ ဟဲဗီးဝတ် ချန်ပီယံတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်း ကွာခြားလွန်းတာကြောင့်
ပိုမိုပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေရပြီး ယခင်ထက် ကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင် လေ့ကျင့်နေရကြောင်း သိရပါတယ်။
နေ့စဉ် ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်မှုကို အဓိကထား ပြုလုပ်နေရပြီး အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် ဖွင့်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်လျှက်ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ .
‘ကိုယျနဲ့ ယှဉျပွိုငျရမယျ့ ဟဲဗီးဝိတျခနျြပီယံ ဗီရာကိုထိုး သတျဖို့ အပွငျးအထနျ လကေ့ငျြ့နရေတယျဆိုတဲ့ အောငျလအနျဆနျး။
မဈဒယျဝိတျတနျး ခါးပတျ ကာကှယျပှဲကို အကောငျးဆုံး ထိုးသတျပွီး ကာကှယျ နိုငျခဲ့ပွီ .ဖွဈတဲ့ အောငျလအနျဆနျဟာ လိုကျဟဲဗီးဝိတျတနျး.
ခနျြပီယံခါးပတျ ကာကှယျပှဲ အတှကျလညျး ပွငျဆငျမှုတှေ ပွုလုပျလြှကျရှိတာ တှရေ့ပါတယျ။
အဆို ပါ လိုကျဟဲဗီးဝတျတနျး ခနျြပီယံ ခါးပတျကို အောကျတိုဘာ ၁၂ရကျနမှေ့ာ ပွုလုပျ ကငျြးပသှား မှာ ဖွဈပွီး ဖိ လဈ ပိုငျ နိုငျငံသား ဟဲဗီးဝိတျတနျးက ခနျြပီယံ ဘရနျဒနျ ဗီရာနဲ့ ထိုးသတျ သှားမှာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
အသကျ ၄၁နှဈ အရှယျရှိ ဟဲဗီးဝိတျတနျး ခနျြပီယံ ဘရနျဒနျ ဗီရာဟာ အရပျ ၆ပေ ၃လကျမရှိပွီး MMA ပှဲပေါငျး ၂၄ပှဲမှာ ၁၆ပှဲ နိုငျထားပွီး ၇ပှဲ ရှုံးထားသူ ဖွဈပါတယျ။
MMA ခနျြပီယံ နှဈဦး ဖွဈတဲ့အပွငျ ယခငျက သငျကွားခဲ့တဲ့ ဆရာတူ ဖိုကျတာနှဈဦးလညျးဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ လကျရှိ အောငျလအနျဆနျး ကတော့ ဒီနှဈ ၂၀၁၉ ခုထဲမှာ ခနျြပီယံ နှဈခုအတှကျ အကောငျးဆုံး ကာကှယျ မှုတှေ ပွုလုပျတာ ဖွဈပွီး.
မဈဒယျဝိတျတနျး ခနျြပီယံ ခါးပတျကို ကာကှယျ နိုငျခဲ့သူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ လိုကျဟဲဗီးဝိတျ ခနျြပီယံ ကာကှယျပှဲ အတှကျ ပွငျဆငျ မှုတှေ ကို စတငျပွု လုပျနပွေီ ဖွဈကွောငျး သိ ရပါတယျ။
ပွိုငျဘကျ ဖိုကျတာ ဗီရာ ကတော့ ဟဲဗီးဝတျ ခနျြပီယံ တဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျပိုငျး ကှာခွားလှနျးတာကွောငျ့
ပိုမို ပွငျဆငျ မှုတှေ လုပျဆောငျ နရေပွီး ယ ခငျထကျ ကွံ့ခိုငျ မှု ရှိအောငျ လကေ့ငျြ့ နရေကွောငျး သိရပါတယျ။
နစေ့ဉျ ခန်ဓာ ကိုယျ ကွံ့ ခိုငျ မှုကို အ ဓိက ထား ပွုလုပျ နရေပွီး အ ကောငျးဆုံး တိုကျစဈ ဖှငျ့နိုငျဖို့ ပွငျဆငျလြှကျ ရှိတာ တှေ့ ရ ပါ တယျ။
တောင်ကြီးပြန်ဖို့ စရိတ်မရှိလို့ လမ်းဘေးမှာ အိပ်နေရတဲ့ သားအမိ ( လူကောင်းနဲ့တွေ့သွားလို့တော်သေးတယ် )